Ndị na-ede uri Andalusia M: Luis García Montero | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carmen Guillen | | Ndị edemede, Abụọ
Abụ m Andalusian, yabụ enweghị m ike izere ya, ma ọ bụ ịgọnahụ ya, ọbara na-agba m. N'ihi nke a, achọrọ m ịme usoro isiokwu, nke a bụ "Ndị na-ede uri Andalusia M: Luis García Montero" nke mbụ n’ime ise, gbasara ndị na-ede uri Andalus na edere.
Ka anyi bido igba egbe Luis Garcia Montero. Know maara ya? Ọ bụrụ na azịza ya bụ mba, nke a bụ ohere gị ime ya.
A mụrụ Montero n'otu ala ahụ García Lorca, Granada, na 1958. Ọ bụ onye na-ede uri, ode akwukwo, Prọfesọ nke Akwụkwọ edemede Spanish na Mahadum Granada na odee. Bụ lụrụ di na nwunye ọzọ dị ukwuu nke Spanish akwụkwọ: Almudena Ukwu.
Na-egosipụta akụkụ nke ọrụ edemede ya buru ibu anyị ga-akọwapụta abụ ndị a:
AIDS, ọrịa na-enweghị njedebe, Granada, Mahadum (1989).
Ọ bụ gị nwe Brooklyn Bridge, Granada, Mahadum (Zumaya collection), 1980, Onyinye Federico García Lorca.
Ogige ndị mba ọzọ, Madrid, Rialp, Onyinye Adonáis, 1983.
Roomslọ dị iche, Madrid, Visor, 1994: (Loewe Prize na National Literature Nrite).
Fọrọ nke nta ka otu narị poems (1980-1996): anthology, okwu mmalite nke José Carlos Mainer, Madrid, Hiperión, 1997.
Zuru oke na Fraịdee, Barcelona, ​​Tusquets, 1998.
Akwụkwọ akụkọMadrid, Castalia, 2002.
Ikpachi anya nke agwọ ahụ, Barcelona, ​​Tusquets, 2003, Onyinye Nleba Mba 2003.
Abu (1980-2005); akwụkwọ asatọ haziri ma chikọta, Barcelona, ​​Tusquets, 2006.
Nwata; Málaga, Castillo del Inglés gbasara mkpokọta, 2006.
Ike gwụrụ, Madrid, Onye nlele, 2008
Abụ, mbipụta nke Juan Carlos Abril, Valencia, Pre-Texts, 2009
Oge oyi nke aka ya, Madrid, Onye nlele, 2011
Uwe Street, Madrid, Oche, 2011
Roomslọ dị iche (afọ 20 bụ ihe), Madrid: Visor, 2014, Mbipụta nke Juan Carlos Abril, Okwu mmalite nke Jesús García Sánchez.
O bipụtakwala akwụkwọ akụkọ: «Echi agaghị abụ ihe Chukwu chọrọ », na ndụ nke poetngel González, onye nwụrụ na 2008, "Agwala m ndu gi" na "Onye kwuru aha gị."
3 ahọpụtara ahọpụtara
O siiri m ike ịhọrọ 3 poems nke Luis García Montero dere, mana ebe ha na-aga:
Eleghị anya ị hụghị m
ma eleghị anya ọ dịghị onye hụrụ m ka m furu efu,
Oyi juru na akuku a Ma ifufe
o chere na m bụ okwute
na achoro ka ahu m tufuo.
A sị na m nwere ike ịchọta gị
ikekwe ọ bụrụ na achọtara m gị, m ga-ama
kowaa mu na gi.
Ma oghe mechiri emechi
n'okporo ámá n'abalị na ehihie,
ọdụ na-enweghị ọha,
agbata obi niile na ndị ha, ọkụ,
ekwentị, paseeji na akuku a,
ọ dịghị ihe ha maara banyere gị.
Na mgbe ifufe chọrọ ibibi onwe ya
Ọ na-achọ m n'ọnụ ụzọ ụlọ gị.
M gaghachi na ifufe
Ọ bụrụ na m mechara chọta gị
na ọ bụrụ na ị gosi, m ga-ama
(Lovehụnanya siri ike)
Ìhè ahụ dara,
O mehiere na oge ya maka ịhapụ gị ọtọ
ur jikọtara gị ọnụ mgbe ị mụmụrụ ọnụ ọchị.
Mgbe ị na-amụmụrụ m ọnụ ọchị
Ahụrụ m onyinyo ahụ na-ada ada,
- mepee mkpọchi uwe nke ji nwayọọ nwayọọ,
hapụ na kapeeti
Ahụ gị wee bụrụ ọlaedo ma jee ije,
-enwe obi ụtọ dịka omenma nke kpasuru anyị iwe.
Nke ahụ kpasuru anyị iwe.
(ndị ọrụ ibe.)
nke akwa uzu) na ochicho,
na ike gburugburu njem,
nke ahụ na-ekwusi ike ma na-akwagide m icheta gị
obi ụtọ, zụlitere,
àmụmà n'etiti anya,
na-eburu uwe mwụda nwata gị.
Ụra buuru m
n’aka nke m na-enweghị ike ịgwa gị.
(Onye ka ị bụ?)
na obi-ebere nile nārọputa obodo-ya nile
na onye ọ bụla ahuhu ewe ulo,
ụzọ dị iche iche nke ịga ije na paseeji
ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ.
na e nwere ihe ndina ụra na egbugbere ọnụ nke ọ bụla,
igwe mbuli na-enweghị ọnụọgụ,
ubube nke juputara na obere nne na nna.
Amaara m na nro ọ bụla
o nwere udi di iche
iji mepụta obi ma ọ bụ ịkpọ aha
Amaara m na olileanya ọ bụla
chọọ mgbe niile
ikpuchi uji gba ọtọ ya na mbadamba
mgbe ị ga-eteta.
na e nwere ụbochị, otu ụbọchị, n'azụ n'okporo ámá niile,
iwe a na-achọsi ike,
akwa ụta, ọkara, na ahụ.
na ịhụnanya nwere akwụkwọ ozi dị iche iche
dee: Ana m ahapụ, ikwu:
Alaghachi m na mberede. Oge obula obi abuo
chọrọ odida obodo.
(Amaara m na ịhụnanya dị nro na-ahọpụta obodo ya ...)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ndị na-ede uri Andalusia M: Luis García Montero
Ndị Andalusian Poets dijo
Zaghachi ndị Andalusian Poets